Bowling Green, KY • Fanosorana vatana sy fanorana NuRu
Mpamatsy bodyrub mahatalanjona, fanorana nuru Bowling Green, lahatahiry KY.
I Bowling Green dia tanàna any an-trano sy any amin'ny fanjakan'ny Warren County, Kentucky, Etazonia. Tamin'ny taona 2018, ny isam-poniny 68,401 177,432 no nahatonga azy io ho tanàna fahatelo be mponina indrindra ao amin'ny fanjakana aorian'ny Louisville sy Lexington; ny faritra an-tanànany, izay ny lehibe indrindra fahefatra ao amin'ny fanjakana aorian'ny Louisville, Lexington, ary Northern Kentucky, dia nisy mponina 231,608 novinavinaina; ary ny faritra statistika ampiarahiny amin'i Glasgow dia manana tombana XNUMX. Amazing bodyrub mpamatsy, nuru fanorana Bowling Green, KY lahatahiry.